अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पको खानपान यस्तो छ शुक्रबार सपथ लिएका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको स्वास्थ्य बारेमा बारम्बार टीका टिप्पणी हुने गर्छ । अहिलेसम्मकै अमेरिकाका पाका राष्टपति ट्रम्प आफू स्वस्थ भएको दाबी गर्दै आएका छन् । उनका चिकित्सकले पनि ट्रम्पको दाबीलाई अनुमोदन गरेका छन् ।
६ फुट तीन इन्च उचाई भएका ट्रम्प उमेरको तुलनामा...
मोदीलाई ट्रम्पको अमेरिका भ्रमणको निम्तो अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई अमेरिका भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरेका छन् ।
मोदीलाई ट्रम्पले ‘यही वर्षभित्र’ अमेरिका आउन आग्रह गरेको दुईजनाका बीचमा भएको टेलिफोन वार्तापछि अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइट हाउसले मंगलबार जनाए...
अमेरिकालाई सदैव दबाब र तनावमा राख्ने यी हतियार !
आजकै दिन अर्थात् २५ जनवरी १९१८ मा रुसलाई सोभियत संघको गणराज्य घोषित गरिएको थियो । रुसी साम्राज्यको समयमै विश्वमा रुसलाई शक्तिशाली मुलुक मानिन्थ्यो ।
प्रथम विश्वयुद्धपछि सोभियत संघ नै विश्वको सबैभन्दा ठूलो साम्यवादी मुलुक बन्यो ।
तर, दोस्रो विश्वयुद्धपछि अमेरिकासहित केही पश्चिमी मुलुक सोभिय...
होटेलमा हिम पहिरो, १२ को मृत्यु १७ बेपत्ता
छ दिन अगाडि मध्य इटालीको एउटा चारतारे होटेलमा हिम पहिरोले पुरिँदा ज्यान गुमाउने व्यक्तिको सङख्या १२ पुगेको छ । यस हिमपहिरोमा परी अझै पनि १७ जना बेपत्ता रहेका छन् । सो हिमपहिरो गएको छ दिन पछाडि पनि कोही व्यक्तिको जीवितै उद्धार गर्न सकिन्छ कि भन्ने कोसिस जारी रहेको बताइएको छ । यद...
अमेरिका टीपीपीबाट बाहिरियो, ट्रम्पले उल्ट्याए ओबामाको निर्णय
अमेरिका १२ देश सम्मिलित ब्यापार सम्झौता ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरशीप टीपीपीको सदस्य राष्ट्रबाट बाहिरिएको छ ।
आफूले निर्वाचनमा गरेको बाचा पूरा गर्ने क्रममा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले टीपीपीबाट बाहिरिने पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामाको पहलमा १२ राष्ट्र...
सामूहिक बलात्कार लाइभ भिडियो फेसबुकमा, ३ पक्राउ स्वीडेनमा सामूहिक बलात्कार आरोपमा तीन जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ति तीन जनाले एक महिलालाई सामूहिक बलात्कार गरेको र त्यसको लाइभ भिडियो सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा देखाएको आरोप छ । उनीहरुलाई आइतबार पक्राउ गरिएको हो । आइतबार बिहान एक महिलाले फोन गरेर फेसबुकमा एक ग्रुपले महिलालाई सामूहिक बलात...
अमेरिकामा आँधीबेहरी, १६ को ज्यान गयो अमेरिकाको दक्षिणी क्षेत्रमा खराब मौसम तथा आँधीबेहरीका कारण कम्तिमा १६ जनाको ज्यान गएको छ । जर्जिया र मिसिसिपी राज्यमा बढी क्षति भएको अमेरिकाको आपदकालिन विभागका अधिकारीले बताएका छन् ।
जर्जियामा १२ जनाको ज्यान गएको छ । खराब मौसमसँगै आएको आँधीबेहरीका कारण बढी प्रभावित भएको जर्जियाको दक्षिणी क्षेत्...
उडीसामा रेल दुर्घटना : १३ को मृत्यु, सयौ घाइते
काठमाडौं, ९ माघ । भारतको उडीसामा रेल दुर्घटनामा परी १३ जनाको मृत्यु भएको छ ।
उडीसाको रायगढमा हीराखंड एक्सप्रेसको आठ वटा डब्बा लिक बाहिर जाँदा रेलमा रहेका मध्ये १३ जनाको मृत्यु भएको हो ।
घटनामा एक सय जना घाइते भएका छन् । दुर्घटनाका कारण अरु रेल सेवा अवरुद्ध बनेको छ ।
बेलायतमा डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गर्न पाउँदा नपाउँदै व्यापक विरोध प्रदर्शन एजेन्सी, ९ माघ । अमेरिकाको निकट मित्र मानिएको बेलायतमा पनि डोनाल्ड ट्रम्पले पदभार ग्रहण गर्न पाउँदा नपाउँदै व्यापक विरोध प्रदर्शन गरिएको छ ।
एक लाख सर्वसाधारण सहभागी ठानिएको प्रदर्शनमा महिलाको संख्या उल्लेख्य थियो । अमेरिकाको वाशिङटनमा भएको वीमेन्स मार्च अन वाशिङटनको समर्थनमा बेला...
अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्पको सपथ
एजेन्सी, ८ माघ ।
प्रतिद्वन्द्वी हिलारी क्लिन्टनलाई पराजित गरेका डोनाल्ड ट्रम्पले ४५ औं अमेरिकी राष्ट्रपतिका रूपमा शुक्रबार सपथ लिएका छन्। आप्रवासीप्रति कडा व्यवहार र अनुदार विदेश नीतिका कारण ट्रम्पलाई अमेरिकाभित्र र बाहिरसमेत संशयका साथ हेरिएको छ।
उनले आफ्नो उद्घाटन मन्तव्यका क्रममा आगामी...
डोनाल्ड ट्रम्पले आजदेखि राष्ट्रपतिको जिम्मेवारी सम्हाल्दै
एजेन्सी, ७ माघ ।
अमेरिकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्पले शुक्रबारदेखि जिम्मेवारी सम्हाल्दै छन । गत नोभेम्बरमा भएको चुनवामा डेमोक्र्याटिक उम्मेदवार हिलारी क्लिन्टनलाई पराजित गर्दै रिपब्लिकन ट्रम्प निर्वाचित भएका थिए । ह्वाइट हाउसमा हुने भव्य समारोहमा ट्रम्पले राष्ट्रपतिको...
ओबामाको अन्तिम पत्रकार सम्मेलनमा : ‘नागरिक स्वतन्त्रताको पक्षमा लडिरहनेछु’
ह्वाइटहाउसबाट भोलिदेखि बाहिरिंदै गरेका अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामाले रुसमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध नहटाउन नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई सल्लाह दिएका छन् ।
जबसम्म रुसले आफ्ना काममा सुधार गर्दैन तबसम्म उसमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन नहुने उनले प्रष्ट गरे । यूक्रेनको सम्...
यस्तो पनि एटीएम ! ३,५०० रुपैयाँ लिन जाँदा ७०,००० रुपैयाँ हातमा
जयपुर, ६ माघ ।
भारतमा नोटबन्दीका कारण कयौं एटीएम मेशिनमा नगदको खडेरी लागेको छ । राजस्थानको टोंक जिल्लास्थित एक एटीएम मेशिनले भने ग्राहकले मागेको तुलनामा २० गुणा बढी रकम प्रवाह गरेको छ ।
बैंक अफ बडौदाको उक्त एटीएम मेशिनमा मंगलबार जब जितेश दिवाकर नाम गरेका एक ग्राहक रकम लिन गए, उनी चकित परे...